Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Aleo misoroka… | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Aleo misoroka…
Na mety ho efa mankaleo ny sasany aza dia tsy mampaninona fa tsy maintsy hiresaka an’ity valanaretina mandringana maneran-tany ity ihany androany. Afaka ho aiza ka tsy hiresaka an’izany tokoa moa? Io no iainan’ny rehetra ankehitriny. Vao mifoha ny maraina ka mandra-pikimpin’ny maso amin’ny alina manaraka dia Coronavirus na Covid-19 no alehan’ny saina. Na matory aza angamba mbola manonofy azy ihany.
Loza iray, loza roa fa tsy mbola nisy tahaka ity hatrizay nanaovana, hoy ilay mpamosavy tratra andro. Na efa nisy tokoa aza mantsy ny areti-mandoza taloha, heverina fa raha amin’izao fandroson’ny fikarohana sy ny teknolojia izao no mbola ahitana toe-javatra tahaka izao dia hita fa voafetra ihany ny fahefana sy ny fahaizan-draolombelona. Any amin’ireo firenena heverina fa matanjaka sy manam-bola, mbola betsaka ireo mamoy ny ainy. Tsy sanatria manamaivana ny fahorian’ny mpiray tanindrazana fa mifanalavitra be ohatra ny isan’ny maty eto amintsika raha mitaha amin’ny any Frantsa, Amerika sy Brezila.
Tsy hanenjika isa akory sanatria no mahamaika fa ny tiana ahatongavana dia tsotra ihany. Raha mbola azo atao ny misoroka, aleo tsy maninan-doza. Mbola maro mantsy ireo tsy tonga saina. Vao miala kely ny làlana na vao miditra anaty tanàna dia tsy misy intsony izany manao arovava-orona izany. Ekena fa mety misy fomba maro hafa ahafahan’ny valanaretina miditra nefa fomba iray ahafahana miaro tena io nefa toa tsy raharahian’ny olona. Tsy manasatra ny mamerimberina izany. Aza miandry ny hafa hiaro ny tenanao sy ankohonanao. Ny fahasahiranana efa mianjady, raha mbola hampiana aretina ihany koa, angamba ho zava-doza. “Ny misoroka no tsara, ny mitsabo sao dia tara”, hoy ilay fiteny mahazatra.